I-UPF50 + Ukuphefumla okungangenisi manzi eXabiso lasehlotyeni |
I-UPF50 + Ukuphefumla okungangenisi manzi ehlotyeni
Igama lemveliso: Amantombazana amancinci Abantwana Iintsimbi zokuqubha iimpahla zebhulukhwe zabantwana iimpahla zokudada
Izinto: I-90% yeNylon + 10% spandex
Phawu: Ukungabinetyhefu, ukukhuselwa kwe-UV
Ukuprinta kunye neBrand: Yoshicilelo screen Silk, ushicilelo transfer ubushushu, Costomized
UV UV zokhuseleko ilanga: UPF50 +
Izitya zokudada zamantombazana, imitya ehlengahlengiswayo, ilastiki ephezulu, ithambile kunye nelaphu elinobuhlobo bomntwana okhulayo
Ukuprintwa okuqaqambileyo kunye nokhetho lombala olonwabisayo kuqinisekisa ukuba ime ngaphandle nangaphandle kwamanzi
UPF 50+ ukukhusela ilanga, khusela ulusu lwentombazana yakho kwimozulu eshushu
Kufanelekile ukubhukuda, ulwandle, iphuli, iqela lokuhlamba okanye iiholide zasehlotyeni
Amantombazana ahlamba iisuti kwiminyaka eyi-2 ukuya kwe-12 ubudala. Olona khetho lufanelekileyo lokuqubha isifundo okanye ulwandle olonwabisayo
Ngononophelo olungapheliyo ngokhuseleko kunye nomdla wemveliso yabathengi, sihlala siphuhlisa iindidi ezihlaziyiweyo zezinto zokudada ezishushu kunye nolwakhiwo olufanelekileyo.
Ndifunde olunye uphononongo kwaye ndilinganisile. Ndonwabile ukuba ndenzile. Intombi yam inxiba i-4T eqinileyo kwaye ilingana kakuhle kunye negumbi elithile lokukhula. Ipateni entle kwaye ndiyayixabisa imitya ehlengahlengiswayo.
Andizange ndibe nethemba eliphezulu kule suti yokuhlamba kuba ixabiso elincinci kodwa ndandiphosakele! Oku kuhambelana kakuhle kwaye kungumgangatho ongcono kakhulu kunokuba bendilindele. Ndiyavuya ndizamile le suti!
Egqithileyo Amacandelo amabini amantombazana amancinci i-Bikini Setha i-Swimsuit Age ukusuka kwi-2 ukuya kwi-12 yeminyaka ubudala
Okulandelayo: Mthubi oMthubi oPhucukileyo omnye wabantwana abaNtombazana yokuDada ngokuDada
Intengiso yamadada abantwana
Amacandelo amabini amaNtombazana amancinci eBikini aseta i-Swimsuit Age F ...
I-Piece enye eNcinci yamaGxa amaGxa aBantwana eSequin Beach ...